Amnesty oo ka walaacsan barakacayaasha - BBC Somali - Warar
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 13 September, 2013, 08:51 GMT 11:51 SGA
Magaalada Muqdisho waxa ku sugan kumanaan dad oo barakacay
Saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa difaacay siyaasadda ay sida xoogga ah dadka barakacay uga saarayaan bartamaha agaalada caasimadda ee Muqdisho.
Kooxda xuquuqda aadanaha u doodda ee Amnesty International, ayaa sheegtay in tobanaan kun oo qof in loo raray duleedka magaalada, halkaasi oo weriye BBC ka tirsan uu sheegay inay aad ugu nugul yihiin weerarro uga yimaada kooxaha Islaamiyiinta ah ee xagjirka ah.
Amnesty waxa ay sheegtay in laba qof lagu dilay intii dadkaasi laga bixinayay xeryaha.
Sarkaal ka tirsan dowladda hoose ee Muqdisho ayaa BBC u sheegay inay danta qaranka ay hormarsiinayaan.
Dowladda ayaa waxa ay dooneysaa inay dib u dhisto inta badan magaalada burburtay kadib dagaal dhawr iyo labaatan sano ka socday.
Xuquuqda Biniaadanka Dacwadda dad dhimasho doon ah oo la diiday